.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ကောင်းကောင်းပေါ်စေချင်ရင်
Blog မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ကောင်းကောင်းပေါ်စေချင်ရင်
ကျွန်တော်တို့တွေ မြန်မာဖောင့်မှာဆိုရင် ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပဲ လူသုံးအများဆုံးပါ။ Blog မှာ သုံးနေတဲ့ Template တွေက
များသော အားဖြင့် နိုင်ငံခြားဆိုဒ်တွေက ရေးပေးထားတာပါပဲ။ CSS ကို အနည်းအပါးသိမယ်ဆိုရင် Template ထဲက
font-family: နေရာတွေမှာ အင်္ဂလိပ် ဖောင့်နာမည်တွေပဲ ရေးထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့Template တွေဆို
ဖောင့် ဒီဇိုင်း အဆန်းတွေ ထည့်ပေးထားတာ အင်္ဂလိပ်စာတွေတော့ လှပါရဲ့။ မြန်မာဖောင့်တွေဆိုရင် ကောင်းကောင်း
မပေါ်တော့ဘူးလေ။ ဟိုတုန်းကဆို အဲလိုတွေ ဖြစ်ကြတာများလို့ Blogger တော်တော်များများ Template ထဲက
font-family: နေရာတွေမှာ font-family: Zawgyi-One; ဆိုပြီးတော့ တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ပြောင်းရတာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ လိုက်ပြင်နေစရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့်တွေ ကောင်းကောင်းပေါ်ပြီး Blog ကစာတွေကို
ဖတ်လို့ အဆင်ပြေနည်းလေးလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ ခုတင်ပေးတဲ့ ကုတ်လေး ရလာတာပါပဲဗျာ..။ လုပ်မယ်ဆိုရင်
တွေ့ပြီဆိုရင် ဒီအောက်က ကုတ်ကို </head> ရဲ့ အပေါ်မှာ ထည့်ပြီးတော့ Save template ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
<link rel="stylesheet" href='https://googledrive.com/host/0B2_DQmuprDoiWGhWQmRGUk8tLVk/zawgyi.css' />
အဲဒါဆိုရင် သင့် Blog က ဖောင့်တွေအားလုံး ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ကောင်းကောင်း ပေါ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Blogger သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
Posted by Thurainlin at 07:12